Abaalmarinta Caddaaladda - Falal Argagix - Afduubkii iyo Dilkii Daniel Pearl
Afduubkii iyo Dilkii Daniel Pearl
Karachi, Pakistan | Janaayo 23, 2002
23-kii Janaayo, 2002, Daniel Pearl ayaa lagu afduubay magaalada Karachi, Pakistan. Pearl, oo ahaa weriyaha Wall Street Journal, wuxuu daba socday qisada bamka kabaha ee Richard Reid, oo isku dayey in uu bamka ku dul qarxiyo dayuurad dul marayso badweynta atlaantikada muddo bil ka hor.
21-kii Febaraayo, 2002, waxaa la helay cajal fidiyow ah oo internetka la soo geliyay oo muujinaysay dilkii Daniel Pearl. Waxaa meydkii Pearl la helay bishii Maajo gudaheeda waxaana loo soo celiyay dalka Mareykanka.
Hal bil kaddib, Ahmed Omar Saeed Sheikh iyo seddex qofood oo lagu tuhmayey ayaa lagu eedeeyay in ay ka qayb qaateen afduubka iyo dilka Pearl. 15-kii Luulyo, 2002-da, waxaa lagu xukumay magaalada Pakistan, iyadoo Sheikh lagu xukumay dil.